Archive du 15-juil-2021
Miha mafana ny toe-draharaha Hidina an-dalambe ny mpanohitra
Hidina an-dalambe ny mpanohitra hoenti-manohitra ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) mikasika ny sata mifehy ny fanoherana, tondroin’izy ireo ho fanitsakitsahana ny
Mbola vanja milevina tsy mipoaka mandindona ny Filoham-pirenena ity adihevitra momba ny governemanta ity. Mikofokofoka daholo indray aloha izao ny ankamaroan’ny mpikamban’ny governemanta,
Mitsahatra ny Grevin’ny Paositra “Voafatotry ny sonia natao ny andaniny sy ny ankilany”
Mitsahatra hatreo ny grevin’ny mpiasan’ny paositra Malagasy taorian’ny fifampidinihana niarahana tamin’ny tompon’andraikitra, araka ny fanambarana omaly tetsy taorian’ny dinika ny talata teo tamin’ny 2ora
Masoivoho Frantsay Hotohizana haingana ny dinika momba ny « îles éparses »
Naneho ny Minisitry ny raharaham-bahiny Atoa Liva Djakoba Tehindrazanarivelo sy ny Masoivoho Frantsay eto Madagasikara Christophe Bouchard omaly,
Jeneraly Désiré Ramakavelo “Mila manapa-kevitra haingana ny Filoha”
“Miteraka olana amin’ny fitantanan’ny filoha ny firenena ny fananany maro an’isa. Misy ny tsy fitovian-kevitra eo amin’ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka,
Arlette Ramaroson “Mbola marary loatra ny Malagasy”
Aleo tsy teraka ny governemanta vaovao rehefa tsy hanao na inona na inona, hoy ny mpitsara iraisampirenena teo aloha, Arlette Ramaroson.
Brunelle Razafitsiandraofa “Misy fitongilanana be ny fampandrosoana isam-paritra”
Tsy mahagaga raha miverina heno indray ny resaka manodidina ireo soatoavina sy rafitra nentim-paharazana toy ny fihavanana sy ny fokonolona ankehitriny,
Tabera Randriamanantsoa “Tsy mandà hiditra anaty governemanta ny CRN”
Mirarakopana ny fanehoan-kevitra ara-politika ao anatin’izao toe-draharaha mifamahofaho eto amin’ny tany sy ny Fanjakana izao.
Ahiahy amin’ny fitantanam-bola Sasatry ny mandamin-dresaka ny Fanjakana
“Ny Ministeran'ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola dia mampahafantatra fa hatramin'ny taona 2019 dia hentitra sy tsy an-kiato ny firosoana amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny fampiasam-bolam-panjakana.
Politika sy fiainam-pirenena Miahiahy an’i Siteny ny mpitondra
Ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena dia mitana andraikitra goavana amin’ny maha Filohana andrim-panjakana, fa eo ihany koa ny Vondrona MAPAR.
Covid 19 Variant Delta Mahazo vahana kokoa ny aretin’an-doha
Marobe ny fanehoan-kevitra hoe mba asio karazany ny vakisiny, hoy ny dokotera mpitsabo, Fidy Bariniaina, dia io fa nasiana ilay izy.
Prefen’Antananarivo “Miverina ny fanassaziana satria be loatra ny gaboraraka”
Miha miverina ny gaboraraka sy ny tsy fanajana ireo fepetra ka noho izany miverina indray ny fanasaziana, hoy ny prefen’Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo omaly.
Orinasa JIRAMA Mampitandrina fatratra ireo mpangalatra herinaratra
Tato ho ato dia maro ireo olona minia mampiasa amin’ny fomba tsy ara-dalana sy manimba ny fitaovan’ny orinasa JIRAMA indrindra indrindra ny halatra herinaratra amin’ny fomba maro isan-karazany.
Fianarantsoa Maty naolan'ny raikeliny ilay zazavavy kely 8 taona
Zazavavy kely iray vao 8 taona monja antsoina hoe : Andoniaina Stephanie monina ao Fianarantsoa no namoy ny ainy tsy fidiny rehefa naolan’ny raikeliny afak’omaly.
Ady amin’ny zava-mahadomelina Manao fanentanana, mitety sekoly ny polisy
Mitohy ny fanentanana hataon'ny Polisy hoenti-miaro ny tanora manoloana ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina eny anivon'ny fiaraha-monina.
FITRAMA-HAFARI Malagasy Manohana ireo ekipam-pirenena Malagasy Rugby
Ankoatra ny asa fitsaboana amin’ny alalan’ny zava-maniry sy ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka dia miroso tanteraka amin’ny fanatsarana sy ny fanohanana ny sehatry ny
Marika Malagasy “Made For a Woman” Nandrombaka ny amboara « Best Commitment »
Nahazo ny anaram-boninahitra na prix « Best Commitment » ny marika Malagasy Made For a Woman. Amboara iraisam-pirenena azo amin’ny alalan’ny fifantenana handray anjara ao anatin’ilay fifaninanana antsoina
Mr Sayda Hitondra “Revy Ma Tsiro” eny Sabotsy Namehana
Eny amin’ny Ma Tsiro Resto Sabotsy Namehana no fotoana miaraka amin’i Mr Sayda ny sabotsy faha 7n’ny volana aogositra izao.